I-duet: Sebenzisa i-iPad yakho njengeLiso elongezelelweyo | Martech Zone
NgoMvulo, Juni 17, 2019 NgoMvulo, Juni 17, 2019 Douglas Karr
Rhoqo emva kwexesha, ufumanisa into emangalisayo oye wazibuza ukuba wakha wayenza njani ngaphandle kwayo. Bendihleli ndisebenza itoni kunye nabaxumi nakwizibonelelo ezisebenza kunye kwilizwe liphela, kodwa ndikufumanise kunzima ukuvelisa ngescreen esinye. Ndonakaliswe kukuba nezikrini ezininzi eofisini yam, kwaye ndifuna into yendlela.
Isifundo sase-Utah sifumanise ukuba abasebenzi babonise ukonyuka okungama-44% imveliso yemisebenzi yokubhaliweyo kunye nokunyuka kwama-29% kwimisebenzi yespredishithi xa usuka kwenye wekhusi iya ku ombaxa-Iliso misela.
Ndifumene usetyenziso lwe-iPad, Duet, Eyenziwe yinjineli kwaye yakhiwa ziiNjineli zeApple, kwaye ibalasele. Ukubambezeleka kuyamangalisa, ndisenokusebenzisa iscreen sokuchukumisa, kwaye ndiyakwazi nokwenza ukuba ibar ibambe amandla kwiscreen se-iPad.
Nalu udubulo lwidesika yam ekude komnye wabaxhasi bam. Ndipakishwe kwi Umboniso weLink plugable yokujonga esweni kwedesika kunye nenethiwekhi, emva koko i-IP Pro yam iplagiwe nge-USB kwi-DisplayLink. I-DisplayLink ayisisiqwenga sehardware… yile nto banayo kulo mthengi.
Ndingayilungelelanisa imiboniso ndisebenzisa iisetingi zokubonisa ze-OSX kwaye ndingarhuqa ndiphose kuso nasiphi na isikrini.
Xa ndihamba, ndizisa nje ilaptop yam kunye ne-iPad naphina kunye ne-plugin naphi na apho ndikhoyo. Uhlelo lokusebenza lweDuet kufuneka lusebenze kuzo zombini izixhobo, kodwa ukuseta kwakuyimpepho kwaye kwakamsinya nje ukuba ndingene nge-USB ukubek'esweni kuyaphila. Ndingasasebenzisa ezinye ii-aplikeshini ze-iPad ukuba ndingathanda.
I-Duet yenze ukuba isoftware yabo ifumaneke kwi-PC nayo!
tags: ukubonisa kabiniUmboniso we-iPadiliso lesibiniiliso lesithathu
Zenziwa njani iinkampani zeMpahla yeMpahla ePhambili zisebenzisa idatha eNkulu?